Zoba i-polygonal kwi-Microstation kwi-Excel-Geofumadas
Ikhaya/Ukulanda/Zoba polygon in Microstation evela Excel
Ukusebenzisa le template, unokwenza i-polygonal kwi-Microstation, ukusuka kuludwe lweebhetri kunye nemida e-Excel, okanye uludwe lwe-coordinates x, y, z.
Icandelo le-1: Uluhlu lweZikhokelo kunye neMida
Masithi sinetafile yedatha evela kwintsimi:
Kwiikholamu zokuqala unezitishi, emva koko umgama oya kwiindawo ezimbini zokugqibela kwaye ekugqibeleni ukuthwala. Sinqwenela ukuzoba le polygon, sisebenzisa iMicrostation.
Kuba abo benza kunye isixhobo AccuDraw ukuqonda oko crazy, hayi nje kuphela ngenxa yokuba isixhobo unamaqhinga ayo ukuba abe window engenasigxina kodwa kuba nawe kufuneka ufake nganye uququzelelo; inombolo engalunganga, zishiya omnye okanye akukho myalelo amandla ngocwangcisa kwakhona ufake iinkcukacha ukuze uqinisekise into engalunganga.
Kule meko siyakwenza ngokusebenzisa i-template ye-Excel, ekuvumela ukuba ufake idatha kwibhokisi, uze ulandele umzobo we-polygonal kwi-Microstation.
Isikhululo Umgama Rumbo
1 - 2 29.53 N 21 ° 57 ' 15.04 " W
2 - 3 34.30 N 9 ° 20 ' 18.51 " W
3 - 4 19.67 N 16 ° 14 ' 20.41 " E
4 - 5 38.05 N 10 ° 59 ' 2.09 " E
5 - 6 52.80 S 89 ° 16 ' 30.23 " E
6 - 7 18.70 S 81 ° 43 ' 5.54 " E
7 - 8 15.18 N 46 ° 12 ' 23.79 " E
8 - 9 24.34 S 83 ° 34 ' 23.62 " E
9 - 10 17.87 S 76 ° 6 ' 49.78 " E
10 - 11 33.64 N 78 ° 38 ' 19.03 " E
11 - 12 17.05 N 88 ° 22 ' 24.25 " E
12 - 13 29.98 S 85 ° 34 ' 34.94 " E
36 - 37 21.79 N 69 ° 17 ' 35.24 " W
Ngokusebenzisa itemplate ezifakiwe:
Idata yesitishi, ukuba ilandelelana, kuphela inombolo yokuqala ebhaliweyo kwaye ithemplate izaliswe kwiikholomu E no-G.
Imida kwikholam H,
Isihloko okanye idatha yekhosi. Akukho mfuneko yokufaka iisimboli zeedigri, imizuzu okanye imizuzwana njengoko ifomathi yeseli sele iyifaka.
Ithemplate inekhethelo lokukhetha ubuninzi bezityalo ezilindelekileyo ukuba sizithinte; khumbula ukuba xa sisebenzisa kuphela ama-decimals amabili, i-polygonal ngokuqinisekileyo ayiyi kuvala kuba ukuchaneka kuya kulahleka kwii-decimals zesibini.
Itemplate ikwavumela ukuba ukhethe ulungelelwaniso lwenqaku lokuqala, ukufezekisa imeko ethile. Masikhumbule ukuba le misebenzi kule fomathi ihlala iphakanyiswa kunye ne-theodolites eqhelekileyo, ukuze ubuncinci kuwo onke amanqaku abe nokulungelelaniswa kwesalathiso se-UTM.
Inkinobho yokudweba igxininiswe, kwaye ngenxa yoko ku-Microstation siya kuba ne-polygon ebonwe, njengoko kuboniswe kwividiyo.
Icala le-2: Uhlu lwe-UTM lulungelelanisa
Itemplate iyasebenza ukuba into esinayo iluhlu lokudibanisa kwifom yeGama, eMpuma, eMantla, ekuPhakameni. Kanye kunye netafile ekhethekileyo eboniswe ngezantsi.
Dot X Y Z
Isebenza kuwo omabini la matyala. Ukuhamba kuya kutsalwa, ukongeza inkcazo okanye inombolo njengombhalo kwivetex nganye. Iya kusebenzisa ubungakanani bokubhaliweyo, umbala, uhlobo lwefonti kunye nolungelelwaniso olusetyenziswayo kwiMicrostation. Ke ukuba ayibonakali kuthi, iya kuveliswa kwakhona.
Itemplate iyafumaneka ukhuphelo lomrhumo oqhelekileyo. Kwaye sithetha ngokufuziselayo, kuba kwabo benza imali ngokwenza i-cadastral okanye i-topography iguana besebenzisa iMicrostation, baya kugcina umsebenzi omninzi.
Fumana I-Template enePaypal okanye iKhadi leKhadi.
Bentley Systems Iibhondi Dgn
Ukuba ufuna ukongeza izitishi ezininzi,
Faka imiqolo oyifunayo, umzekelo faka phakathi kwemiqolo 10 kunye ne-11
uze ukope enye yemigca epheleleyo ngokuyichukumisa esuka kwisihloko esisekhohlo kwaye unamathisele kwimigqa oyifakile ngokukhethayo kuquka imigca ye-10 kunye ne-11 kwaye ibangela ukuba amafomula ahambe kwaye ukunyanzelisa ukuqhubeka.
Ukuba ungathandabuzeki, kwaye ekubeni ufumene itemplate ungacela inkxaso editor@geofumadas.com
Usuku olungileyo ithemplate ayindivumeli ukuba ndongeze izitishi ezingaphezulu, undixelela ukuba ndiyakongeza njani, kwaye ukuba unako ukunika imiyalelo engaphezulu
Usuku olungileyo ndifumene itemplate yakho ukwenza i-polygonal kodwa andivumeli ukuba ndongeze imiqolo engakumbi ukuba unganditsho ukuba ungongeza njani izitishi nceda
No. La plantilla solo funciona con Microstation.
i-template isebenza kunye ne-autocad okanye i-civicad?
Ndineemephu ye-6 imephu apho ndifuna ukulanda amanqaku athile, kodwa ndiyixhuma kwikhompyutha yakho eneefestile 7 kwaye ayiyikuyiqonda
Mándame el archivo excel, con los datos que le has agregado. Para probar porqué no te funciona.
umhleli (kwi) geofumadas. com
Ndine template, ndabhalela isitishi, inkambo, umgama, kunye nokulungelelaniswa kokuqala kwekhosi, musa ukuyivula, andiyiqondi, x.
Iifayile zohlobo lwe-AutoCAD